अन्य माध्यमबाट इरानमा अमेरिकी युद्धको अन्त्य हुँदैन - Samajbad
अन्य माध्यमबाट इरानमा अमेरिकी युद्धको अन्त्य हुँदैन
इरानले सन् १९७९ मा अमेरिका र बेलायतको तानाशाही शासनबाट आफ्नो सार्वभौम स्वतन्त्रता पुनः प्राप्त गर्यो । डेमोक्यार्याटिक र रिपब्लिकनले अनगिन्ती अस्वस्थ्य चालसहित देश र यसका जनतामाथि प्रतिबन्धित युद्ध लडे । अमेरिकी सत्तामा ट्रम्प वा बिडेन जो भए पनि अन्य माध्यमबाट इरानमा लामो समयदेखि चलिरहेको अमेरिकी युद्ध परिवर्तन हुँदैन । इजरायलको मुख्य क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धीलाई तटस्थ बनाउनुका साथै अमेरिकी नियन्त्रणबाट इरानी स्वतन्त्रताको बारेमा जहिले पनि अमेरिकी भूमिका एउटै प्रकारको हुने गरेको छ । मध्य पूर्वमा रहेको विशाल हाइड्रोकार्बन संसाधन र जनसंख्यामा नियन्त्रणको लागि अमेरिकी क्रोध रहिआएको छ । तर उसका प्रयत्नहरु इरानका लागि भने कहिलै पनि संभव भएन।
सन् १९७९ मा, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय आपातकालीन आर्थिक शक्ति ऐन (आईईईपीए) ले राष्ट्रपतिहरूलाई अधिकार नभएको अवस्थामा पनि विदेशी खतरा भएको दावी गर्न अधिकार दियो । तिनीहरूले न्यायसंगत राष्ट्रिय आपतकाल घोषणा र वाणिज्य तदनुसार नियमन गर्न सक्ने अधिकार पाए । सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्ति पछि, अमेरिकाले इरानको बिरूद्ध अन्य माध्यमबाट युद्ध सुरू गर्यो । सुरुमा यसका नीति निर्माताहरूले १२ अरब अमेरिकी डलर बराबरको इरानी सरकारी बैंक जम्मा, धितो, सुन र जसमा अमेरिकी बैंकको विदेशी शाखाले १२ बिलियन अर्ब डलर अन्य सम्पत्तिहरू जफत गरे ।
एउटा पूर्ण व्यापार प्रतिबन्धको अनुसरण गरियो । जनवरीमा यो अल्जीयर्स सम्झौताको प्रावधान अन्तर्गत छोटो अवधिमा हटाइएको थियो । देशको अधिकांश सम्पत्ति अनब्लक गरियो, जबकि ईरानी सम्पत्ति नियन्त्रण नियमहरू लागू गरियो । इरानमा अमेरिकी दशकौं प्रतिबन्ध लगाइएको युद्धको दशकौंसम्म तिनीहरू औचित्यको अभाव भए पनि झूटा दाबी भने गरिरहे । अमेरिकाललाई ईरानको अस्तित्वको अस्वीकार्यता अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरदेखि शुरुवात भएको थियो र अहिले पनि जारी रहेको छ ।
इरानको अर्थव्यवस्था थिलोथिलो पार्न र सर्वसाधारण जनताले कष्ट भोगुन् भन्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्र र यसका निकायहरूमा अनगिन्ती उदेश्यसहित इरानमाथि अमेरिकाले नाकाबन्दी लगाएको थियो । सन् २०१० मा, ओबामा र बिडेन शासन कालमा क्लिण्टनको कार्यकालमा लगाएको नाकाबन्दीलाई कसिलो बनाउँदै इरानमाथि बृहत्तर प्रतिबन्ध लगाईयो । ईरानमाथिको प्रतिबन्ध ऐनलाई विस्तार र कडा बनायो जसले तेहरानको तेल क्षेत्रको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूलाई दण्ड दियो । यो इरानी खाद्य सामग्री र कार्पेटको आयातलाई निषेध गरेर अगाडि बढ्यो । सीधा वा तेस्रो देशहरू मार्फत अन्य ईरानी उत्पादन र सेवाहरूको आयात प्रतिबन्धित थियो । इरानमा अमेरिकी निर्यात प्रतिबन्धित छ । अमेरिकी फर्महरू, संगठनहरू र व्यक्तिहरू इरानसँग सामान्य व्यापार वा अन्य सम्बन्ध राख्न प्रतिबन्धित छन्।
ट्रम्प शासनमा पनि आफना पूर्ववर्र्तीहरुले झै यसलाई अझ कडा पारेर गए । अमेरिकाले इरुलामिक रिभोलुसन भएदेखि इरानमा जे थपेका सबै थोक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट रुपमा उल्लंघन गरेको छ । दशकौं दशकमा इरानमा अन्य माध्यमबाट अमेरिकी युद्धको बावजुद इरानका शासक अधिकारीहरूले अमेरिकी आक्रमणलाई सफलतापूर्वक प्रतिकार गर्न सकेका छन् । डायबोलिकल अमेरिकी प्लट असफल भयो । अन्य लक्षित राष्ट्रहरू विरूद्ध पनि अमेरिकी प्रतिबन्ध युद्धको लागि नै हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । बुधवार इरानका उप विदेश मन्त्री अब्बास अरघचीले अमेरिकी सरकारमा ट्रम्प वा बिडेन चुनिए पनि इरानलाई कुनै फरकनपर्ने बताए । किनभने उ इरान मामिलामा सधै उदासीन रहदै आएको छ । उनले निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रक्रियालाई “तमाशा” भनेर सम्बोधन गर्दै भने, इरानले अमेरिकासँग आफ्नै हितका आधारमा निर्णय गर्नेछ र व्यवहार गर्ने छ ।
“अमेरिका र विश्वका अन्य ठाउँहरूमा भएका सबै संकेतहरूले संकेत गर्दछ कि संसारले यो कुरा बुझीसकेको छ कि अधिकतम दवावले काम गर्दैन र त्यसको युग सकियो।” अक्टोबरको आखिरमा, रोहानीले जोड दिए कि अमेरिकी ूप्रतिबन्धले मानिसहरुलाई असर गरेको छ तर हामीलाई झुकाउन खोज्ने उसको प्रयास असफल भएको छ । सन् १९९७ देखि अमेरिकाको विदेश नीति प्रमुख नियुक्त नगरेसम्म ट्रम्प र पोम्पियो इरानप्रति बढी आक्रमक नै थिए । के बिडेन र ह्यारिस इरानमा अधिकतम दवावू जारी राख्नेछन् ? के उनीहरूले ट्रम्प शासन नीतिहरूलाई कडाईका साथ कडा बनाउने छन् ? के उनीहरूको स्वीकार्य मागलाई जग्गामा फर्कने जस्ता कुनै पनि सम्भावना अमेरिकाको एक पार्टीकोे राज्यको पछाडि पार्नेछ ?
अमेरिकी नियन्त्रणबाट मुक्त सबै राष्ट्रहरू अमेरिकाको इष्ट रणनीतिको युद्धहरूबाट शासन परिवर्तनको लागि लक्षित सूचीमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय, संवैधानिक र आफ्नै कानुनको उल्लंघनमा अचेत वैश्विक प्रभुत्वको खोजीमा देश र विदेशमा अमेरिकी मानवताविरूद्धको युद्धले विश्व स्तरमा आवाज उठिरहेको छ । अमेरिका एक बदमाश राज्य, एक क्रुर राज्य, विश्व शान्ति, स्थायित्व, कानूनको शासन, र सबैको लागि उचित हिसाबले अवहेलना गर्ने देश हो । डेमोक्रेटिक वा रिपब्लिकनले व्हाइट हाउस वा कांग्रेसलाई नियन्त्रण गरेपनि मानवताको बिरूद्ध सामान्य युद्धको रूपमा अमेरिकी नीति जारी नै रहने छ ।
इरानी समाचार संस्था प्रेस टिभीमा स्टीफन लेन्डम्यानको लेख नेपालीमा भावानुवाद ।
क्यानले बोलायो बन्द प्रशिक्षण, २२ खेलाडीको नाम सिफारिस